DABOOLKA LO'DA: WAXA LOO BAAHAN YAHAY, SABABTA BARE, WAXA LA SAMEEYO HADDII AY JILICSAN TAHAY - XOOLAHA
Isku dhejinta daboolka lo'da - ficil ah in badan oo cabsi badan laga soo bilaabo carruurnimada.
Haddii nidaamkani dhab ahaantii jiro iyo sababta loo isticmaalo, waxaynu sii sheegi doonnaa dheeraad ah.
Waa maxay sababta daboolka lo'da
Burenka, sida geedo kale oo muhiim ah, waa mid muhiim ah - iyada oo ay ka caawiso xayawaanka ka soo horjeeda guntinta dhirta, duqsiyada, gadree iyo kaneecada. Haddii burkaagu uu si tartiib ah u lumo oo u dhaqmo si aan caadi ahayn, tani waxay muujin kartaa in ay injir leedahay, iyo tallaabooyin degdeg ah oo la qaado si loola dagaallamo dulin. Taakuleynta jajabka ee lo'da ma jiraan, laakiin 90kii qarnigii la soo dhaafay, joojintooda waxay caan ku ahayd New Zealand si looga fogaado dhacdooyinka leptospirosis ee xayawaanka.
Ma taqaanaa? Caanaha lo'da waxay ku xirtaa sunta sunta bini'aadamka, sidaas darteed waxaa badanaa lagu soo saaraa warshado halis ah.
Waa maxay sababta qaansaradu ujiraan
Tani waxaa loo sameeyaa si loo xakameeyo xayawaan aad u jilicsan. Marka uu ku wareegsan yahay qulqulkiisa, qofku wuxuu xanuujiyaa xanaaq ama dibi, taas oo xayawaanka ka dhigaysa mid aad u adeecsan. Xeeladahan waxaa inta badan loo adeegsadaa in la dhaqaajiyo lo'da laga bilaabo xannibaadda.
Miyuu suurtagal yahay in la jarjiyo daboolka
Marka hore, milkiilayaashu waxay isku dayaan inay arrintaan u sameeyaan sababo nadiif ah - timo burusheed oo muddo dheer ah kuma ururi doonaan wasakh iyo digada.
Akhri wax ku saabsan qaababka dhismaha, goobta iyo shaqooyinka candhuufta, wadnaha, geesaha, ilkaha, indhaha xoolaha.
Marka labaad, adeegayaasha iyo caanaha lagu daro ee lo'da leh qorraxda gaaban ayaa laga yaabaa inaysan ka welwelin qasdiyada degdegga ah ee ay inta badan ku dhacaan inta lagu jiro taabashada lo'da. Farsamooyinka xidhitaanka waxay ka kooban tahay qaybta hoose ee qaybta hoose iyadoo la adeegsanayo xidhmo xidhmo ah oo xakameynaya wareegga dhiigga ee aaggan.
Laakiin waxaa jira hab aad u bini-aadannimo ah - iyada oo la adeegsanayo mashiinka gaarka ah ama maqaska, timo dhaadheer leh oo burush ah ayaa si fudud loo jarayaa, ka tagaysa farabadan yar yar.
Waa muhiim! Daraasadaha casriga ah waxay muujiyeen in joojinta dabada ee lo'da ay tahay mid aan macquul ahayn, maaddaama ay dharkooda dhererkoodu aanu u dhicin wax sabab u ah fiditaanka leptospirosis.
Waa maxay sababta lo'da uu leeyahay dabo jilicsan
Xaaladdani waxay sababtaa cudur osteodystrophy ah oo joogto ah. Cudurka kelyaha iyo lafaha iyo cuntada lafaha, Fosfatka Hoorka, iyo saliidaha fitamiin A iyo D. Dabeecadda lafteeda ayaa daryeeshay in lo'da ay fursad u leedahay in ay isku kalsoonaadaan iyaga oo ka ilaaliya cayayaanka, iyaga oo ku siinaya dabo dheer oo leh caarad raaxo leh. Waa xubin muhiim u ah lo'daha, in badan oo ay kufadhiyaan waxay cadeeyeen macnaha aan macnaha lahayn.